हैन, बरिष्ठ बाड्ने तरीका चै के र छ ?-NepalKanoon.com
सर्बोच्च अदालतले २७२ जना कानून ब्यवसायीलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने गरि गरेको निर्णयमा एक न्यायधिसको फरक मत जाहेर भएको छ । अदालतले भरखरैमात्र २७२ जाना कानू ब्यवसायीलाई बरिष्ठको उपादी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सबोच्च अदालतका न्यायधिस इश्वरी प्रसाद खतिवडाले उक्त फरकमत जाहेर गरेका हुन । उनले आफ्नो फरक मतमा भनेका छनः बैज्ञानिक रुपमा संख्या निर्धारण गरेर कानूनले परिकल्पना गरेको मापदण्ड पुर्याएर मात्र बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्रदान गरिनु पर्दछ । उनले आफ्नो धारणालाई प्रस्ट पार्दै भनेका छन योग्यता पुगेकाहरुलाई नदिइ राख्न हुदैन । उनको फरक मतलाई निर्णयमा फरक मतको रुपमा राखिएको छ ।
बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सम्वन्धमा सर्बोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायधिसको बैठकवाट निर्णय हुने ब्यवस्था छ । उपाधी प्रदान गर्दा नेपाल वारकाउन्सिल ऐन, २०५५ ले नीतिगत रुपमा दफा २१ को (१) मा ‘कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा पन्ध्रवर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानून व्यवसाय गरी पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेकोछ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा त्यस्तो अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान स्वरुप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले तोकिए बमोजिमको आचरण पालन गर्नु पर्नेछ’ भनी ब्यवस्था गरेको छ ।
निर्णय पश्चात कानून बृतमा विभिन्न ढंगका विवेचना भएको छ । नेपाल लक्याम्पसका प्राध्यापक गोपाल दाहाल आफ्नो फेबुक वालमा लेख्छन: ‘साथिहरु ! वरिष्ठ दिदाकाेअन्यायलाई बेलैमा चिनौ। मेराेत ३४ वर्षकाे वकालत र ३१ वर्ष कानुन पढाएकाे अनुभव बिलाएर गएकाे छ। हाेसियार रहनु है !’
कानून ब्यवसायी उच्च अदालत बार एशोसिएसनका पुर्व सचिव बसन्त बस्नेत लेख्छन: ‘हैन, बरीष्ठ बाड्ने तरीका चै के र छ ? कुनै पार्टीको केन्द्रिय समीती बीस्तार जस्तो छ त । सुसीला बीरोधी सबले पाएछन् ।’
अर्का एक कानून ब्यवसाइ लेख्छन प्राध्यापक डा. विध्याकिसोर रोय अयोग्य हुने अदालत नगएका सामान्य प्राध्यापक बरिष्ठ ठहरिने कस्तो न्यायहोला न्याय मुर्तीको ?
त्यस्तै गरी अर्का एक कानून ब्यवसायी मालपोत कार्यलयमा पनी अव बरिष्ठकै सुविधा पाउने भए सोवाग्राहीले भन्दै लेखेका छन ।
त्यस्तै सामाजिक संजालमा उपाधि पाएकाहरुलाई बधाइको पनी उत्तिकै बर्षा भएको देखिन्थ्यो । जे भएता पनी भएको निर्णय पाएको उपाधीको वदनाम नहोस मुल्यांकन कायम होस सबैलाई शुभकामना ।